Ambodisaina Ivondro : nomen’Ambatovy velon-tena ny mponina sahirana #canada #sherrit #ambatovy | NewsMada
Ambodisaina Ivondro : nomen’Ambatovy velon-tena ny mponina sahirana #canada #sherrit #ambatovy
Nomen’Ambatovy alalana ny fikambanana Love and Care, hamboly sy hiompy maimaimpoana, mandritra ny telo taona, eo amin’ny faritry ny tanin’Ambatovy, antsoina hoe “Tsaralakana” sy “Tanilemaka I”, manamorona ny lalana mankany Ambodisaina Ivondro.
Entina hamatsiana ny toeram-pisakafoana, mamahana mpianatra 750 ao amin’ny sekoly Bethany school any Toamasina ny vokatra, sy ho an’ny asa soa hanampiana ny ankizy mirenireny sy ny voafonja. Nanomboka ny volana jolay 2015 ny fifanarahana amin’ny Love and Care, sady hiarovana ny tany manodidina ny fotodrafitrasan’Ambatovy amin’ny fampiasana tany tsy ara-dalàna.
Nambaran’ny talen’ny fampandrosoana maharitra ao amin’ny Tetikasa Ambatovy, Rtoa Isabelle Teboul, fa “faly izahay ary afaka mirehareha fa tratra ny tanjona amin’ny fiarovana ny tany amin’ny alalan’ny fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena maharitra. Manamora ny fahazoana sakafo sy mamahana ireo ankizy ny vokatra eto an-toerana. Mendrika halain-tahaka ny finiavana sy ny fizakan-tenan’ny fikambanana Love and Care”.
335.000 ora tsy nahitana loza ny fanamboarana ny tsena
Ankoatra ireo, mandroso ny asa fananganana tsena vaovao any Moramanga, tohanan’Ambatovy ara-bola. Voahaja ny fenitra aro loza sy ny fahasalamana, ka tsy nahitana loza mihitsy ny 335.000 ora niasana ireo mpiasa 238 avy amin’ny orinasa efatra manao ny asa. Notoloran’Ambatovy mari-pankasitrahana izy ireo, ny 13 janoary teo tany Moramanga.n